चर्चित नायिका सुहाना थापाको आज जन्मदिन, कतिवर्ष लागिन् ? (तस्वीर सहित) - www.dthreeonline.com
चर्चित नायिका सुहाना थापाको आज जन्मदिन, कतिवर्ष लागिन् ? (तस्वीर सहित)
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, बैशाख २६, २०७७ समय: ११:०७:०७
ईटहरी/ ”ए मेरो हजुर ३” बाट डेव्यु गरेकी नव अभिनेत्री सुहाना थापाको जन्मदिन शुक्रबार अर्थात आज परेको छ । अभिनेत्री तथा निर्देशक झरना थापा र निर्माता सुनिल थापाकी एकली छोरी सुहाना आजबाट २३ वर्षमा लागेकी छन् । उनी अभिनित फिल्म ‘ए मेरो हजुर-३’ ब्लकबस्टर फिल्मको सुचिमा पर्यो । पहिलो गासमै दुध र भात पाएकी थापाले सो फिल्ममा नायक अनमोल केसि संग अनस्कृन रोमान्स गरेकी थिइन् ।
सुहाना थापाको जन्म सन् १९९६ मे ८ मा काठमाडौंमा भएको थियो । उनले आफ्नो अध्ययन संयुक्त राज्य अमेरिकामा गरिरहेकी छन । उनले व्यवस्थापन संकायमा स्नातक गरेकी छिन् । उनको पारिवारिक पृष्ठभूमि चलचित्र क्षेत्रसँग नजिक रहेकै कारण पनि उनलाई नेपाली चलचित्रमा आउन र सफल हुन महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।
अमेरिकामा ब्याचलर पढिरहेकी सुहानालाई आमा झरनाले एक्कासी फोन गरेर ‘ए मेरो हजुर ३”मा अभिनय गर्न बोलाएको एक अन्तर्वातामा सुहानाले भन्दै आएकी छन् । कृष्ण भक्त सुहाना एक परिपक्व व्यक्तिको जस्तै स्वभाव छ । साधारण कुर्था सुरुवाल मन पराउने उनी पढाई र अभिनय लगायतका कुराहरुमा धेरै ज्ञानले भरिपूर्ण देखिन्छ ।
अभिनेता अनमोल केसी र सुहानाको मुख्य भुमिकामा बनेको ”ए मेरो हजुर ३” ले राम्रो कमाई समेत गर्यो । अनमोल र सुहानाको अभिनय र जोडि पनि दर्शकले अतिनै रुचाएका थिए । सबैले उनीहरुले गरेका कामको तारिफ नै तारिफ दिएका छन् । सोही जोडिलाई फेरि पनि दर्शकले पर्दामा हेर्न पाउने भएका छन् । ‘ए मेरो हजुर ४’ मा पनि यो जोडि दोहोरिदै छ ।
सुहानाको बाल्यकालका केही तस्वीरहरु :
हेरौ सुहानाको अन्य तस्वीरहरु । प्रस्तुत तस्वीरहरु सुहानाको ईन्स्टा एकाउन्ट बाट लिइएको हो ।